Trump: Iiraan waan la hadlaynaa balse tallaabo militari meesha kama marna | Baydhabo Online
Trump: Iiraan waan la hadlaynaa balse tallaabo militari meesha kama marna
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu la hadlo madaxweynaha Iran Hassan Rouhani, balse marwalba ay suuragal tahay in tallaabo milatari uu Mareykanku ka qaado Jamhuuriyadda Islaamiga.Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa casha sharafeed la qaatay Prince Charles, Prince Wales iyo Camilla, Duchess of Cornwall, Winfield House, inta uu booqashada ku joogay London.
“Sidaas darteed Iran waa meel colaadeed marki ugu horreysay oo aan xilka qabtay waxaan telefishanka British ITV u sheegay iney Iiraan safka hore uga jirto “waddamada argagixisada calamka wakhtigaasi wa la ila yaabbanaa balse hadda waxan u maleynayaa in la ogaaday” ayuu yiri.
Markii la waydiiyay haddii uu u maleeynayo inuu dalkiisa u baahan doono inuu Iiraan ka qaado tallaabo millatari waxaa uu yiri, “Mar walba waa suuragal balse ma doonayo anigu, balse marweliba waxaa jira fursado tallaabbo militari lagu qaadi karo”.
Sida oo kalana waxaa la weydiiyey inuu diyaar u yahay inuu Rouhani uu wadahadal la yeesho wuxuu ku jawaabay “Haa, waan doonayaa inaan la hadlo”.
Wuxuu yiri, markii la waydiiyay, inuu diyaar u ahaa inuu la hadlo Rouhani: “Haa, dabcan. Waxaan jeclaan lahaa in aan ka hadlo. “
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan wuxuu horay u sheegay in uusan rumeysnayn in dagaal uu ka qarxi doono gobolka xilli uu jiro walaac laga qabo xiisadaha sii kordhaya ee dalkiisa uu kala dhaxeeyo waddanka Mareykanka.
Maxamed Javad Zarif ayaa waxaa uu warbaahinta qaranka dalkiisa ee IRNA uu u sheegay in Tehran aanay dagaal doonayn, uusanna jirin dal “ku fakaraya inuu Iiraan dagaal kaga hortago”.